Wasiiru dowlaha wasaaradda dhalinyarada Koonfur Galbeed oo xilka laga qaaday - Halbeeg News
Wasiiru dowlaha wasaaradda dhalinyarada Koonfur Galbeed oo xilka laga qaaday
BAYDHABO(HALBEEG)-Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Shariif Xassan Sheekh Aadan ayaa xilka ka qaaday wasiiru dowliha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed Abba Awow Suufi Caffan.
Wareegta ka soo baxaday xafiiska madaxweyne Shariif ayaa lagu sheegay in Abba Awow Suufi Caffan uu ku dhaqaaqay aflagado iyo anshax xumo taasina ay keentay inxilka laga qaado.
“Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, marku arkay, anshax xumadda iyo aflagaadada ka baxsan baratakoolka iyo sharafta golaha wasiirada, marku arkay dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobka 48-aad faqradiisa 2-aad iyo qodobka 56-aad faqradiisa 3-aad, markuu tixgeliyay, howlaha baaxadda leh ee u xil saaran yahay wasiiru dowlaha, iyo in lagama maarman tahay in la helo qof aqoon u leh si loo fuliyo shaqada wasaaradda, waxaan xilkii ka qaaday wasiiru dowlihii wasaaradda dhalinyarada Abba Awow Suufi Caffan laga bilaabo 5-ta bishan November”ayaa lagu yiri wareegtada.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Shariif Xassan Sheekh Aadan uu ka haray tartanka madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Guddiga doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa intooda badan is casilay maalintii shalay iyagoo sheegay in fara gelin lagu hayo shaqadooda.
Doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa lagu wadaa in ay qabsoonto 17-ka Nofeembar iyada oo ay bilaabatay diiwaan gelinta musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeed.
Koox hubeysan oo afar ruux ku dilay Shabeellaha Dhexe
In ka badan 70 arday oo laga afduubtay dugsi ku yaalla galbeedka Cameroon